မည်သည့်ရွေးချယ်မှုကိုရွေးချယ်ရန် - oscillating tool သို့မဟုတ် rotary tool ကို? - Mibond စက်ပစ္စည်း
နေအိမ် / သတင်း / ဘလော့ / မည်သည့်ရွေးချယ်မှုကိုရွေးချယ်ရန် - oscillating tool သို့မဟုတ် rotary tool ကို?
မည်သည့်ရွေးချယ်မှုကိုရွေးချယ်ရန် - oscillating tool သို့မဟုတ် rotary tool ကို?
views:100 Author:ဆိုက်ကို Editor ကို အချိန် Publish: 2021-03-23 မူလ:ဆိုက်ကို
အကယ်. သင်သည်ဤကိရိယာနှစ်ခုကိုအသုံးပြုခြင်းတွင်အတွေ့အကြုံမရှိပါကဤနှစ်ခုအကြားခြားနားချက်ကိုသင်ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မည်အကောင်းဆုံးပါဝါကိရိယာများအလွန်ကွဲပြားခြားနားသည်မဟုတ်, သို့သော်အမှန်မှာ, ဤကိရိယာနှစ်ခုသည်မတူညီသောနည်းလမ်းများနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ ကြိုးကြိုးများအသုံးပြုရန်လိုအပ်သောအလုပ်များစွာရှိပါသည်။ သို့သော်ထိပ်တန်းကြိုးမဲ့ oscillating ကိရိယာများကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်, ကိရိယာအချို့မ0ယ်မီဤကိရိယာများတွင်မည်သည့်လုပ်ဆောင်မှုများနှင့်မည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုသင်သိသင့်သည်။
rotaမှီခိုကိရိယာများတွင်ကြိတ်ခွဲခြင်း, သဲများနှင့်ဖြတ်တောက်ခြင်းကဲ့သို့သောကွဲပြားခြားနားသောလုပ်ဆောင်ချက်များစွာရှိသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြောခြင်းRotary Multi tool ကိုကွဲပြားခြားနားသောဆက်စပ်ပစ္စည်းများအစားထိုးရန်နှင့်မတူညီသောအလုပ်များကိုလုပ်ဆောင်နိုင်ရန်မတူညီသောဆက်စပ်ပစ္စည်းများဖြင့်နေရာတစ်ခုရှိသည်။ ၏ထိပ်rotary diy tools တွေကိုအလုပ်စဉ်အတွင်းအလွန်လျင်မြန်စွာလှည့်ခြင်းနှင့်တိကျသောအလုပ်အများကြီးလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်, ဒါကလက်မှုပညာရှင်များလိုအပ်ပါတယ် ' S နည်းပညာအဆင့်။
အပေြာင်းRotary tool ကို၏အကျိုးကျေးဇူးများ:
ကွဲပြားခြားနားသောကြောင့် Rotary Tools များသည်အမျိုးမျိုးသောအလုပ်များကိုလုပ်ဆောင်နိုင်သည်အိတ်ဆောင် Power Hobby Rotary Tools Kits ကို Rotary Tools ၏ထိပ်တွင်အစားထိုးနိုင်သည်။ Rotary Tools များသည်မတူညီသောပစ္စည်းများသန့်ရှင်းရေး, အရောင်ဖျော့ဖျော့များနှင့်ထိတွေ့ခြင်းစသည့်အလှည့်အပြောင်းကိရိယာများထက်အလုပ်များကိုပိုမိုလုပ်ဆောင်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင် oscillating tools များ၏ဆက်စပ်ပစ္စည်းများသည်အလွန်စျေးကြီးသည်, အထူးသဖြင့်အထူးအလုပ်တစ်ခုလုပ်ချင်သည့်အခါ သို့သော် Rootary Tools များသည်သင့်အားဆက်စပ်ပစ္စည်းများပိုမိုရွေးချယ်နိုင်ပြီးဤဆက်စပ်ပစ္စည်းများသည်စျေးသက်သာသည်။ လူအချို့သုံးရန်လိုသည်သေးငယ်တဲ့ rocary tool ကိုလုပ်ငန်းများကိုစွဲကိုင်ထားခြင်းအတွက် S သည်အလွန်အသေးစိတ်အခြေအနေများကိုပိုမိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။ သင်မတူညီသောပစ္စည်းများအပေါ်သူငယ်ချင်းများသို့မဟုတ်ဆေးသုတ်ရန်သင်လက်ဆောင်အချို့ပြုလုပ်လိုသည်ဖြစ်စေ, သင် damy closing-ode-ode-edge tool ကို0ယ်ယူပြီး Rotary Tool တွင်တပ်ဆင်နိုင်သည်။
oscillating tool တစ်ခုကဘာလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤကဲ့သို့သောကိရိယာမျိုးကိုအကြိမ်ကြိမ်တွေ့မြင်လေ့ရှိသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင် oscillating tool သည်ကြီးမားသောစက်မှုလုပ်ငန်းစီမံကိန်းများတွင်အလွန်များသောကြောင့်ဖြစ်သည်ပါဝါ Tool ပစ္စည်းများအချို့သောအတော်လေးကြီးမားသောစီမံကိန်းများအတွက်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာပြီးစီးရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ အပေြာင်းလှံတံtool ကို unta နေစဉ်, လျင်မြန်စွာနှင့်အပြေးထွက်ရွှေ့ဖို့ဒီဇိုင်းဆွဲထားသည်မှီခိုတန်းဆာကိရိယာဝင်ခြင်းအရမ်းမြန်တယ် အလုပ်ခွင်များတွင်ကွဲပြားခြားနားမှုအချို့ရှိနေသော်လည်းဤနှစ်ခုစံပြပါဝါ tools များအများအပြားတူညီတာဝန်များကိုကိုင်တွယ်နိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်လှံတံTool သည်ကြိတ်ဆုံနှင့်ဖြတ်တောက်ခြင်းအတွက်ပိုမိုသင့်တော်သည်။
အပေြာင်းoscillating tool တစ်ခု၏အကျိုးကျေးဇူးများ -
အချို့သောစီမံကိန်းများရှိ oscillating ကိရိယာများအသုံးပြုခြင်း၏အကြီးမားဆုံးအားသာချက်မှာ၎င်းသည်ဖုန်မှုန့်များနည်းပါးသည်။ ဒါကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့Power Tool ကိုနှမြောOscillating tools များမှာအတော်လေးကြီးမားသည်, ၎င်းသည် rotary tools များကဲ့သို့မကောင်းသောအရာမဟုတ်ပါ။ သစ်သားပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သောအခါဆက်စပ်ပစ္စည်းများလျင်မြန်စွာလှည့်လေ, ဖုန်မှုန့်များပိုများလာလိမ့်မည်။ အဆိုပါ oscillating tools များသည် Rotary Tools များထက်ပိုကြီးသည်, ထို့ကြောင့်သေးငယ်သည့်မော်ဒယ်များကိုမှီခိုသည့်အခါပိုမိုတိကျသောဖြတ်တောက်ခြင်းရှိလိမ့်မည်။ ပေမယ့်Rotary Numbering Tools များကျဉ်းမြောင်းသောနေရာများတွင်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော်သင်သည်ပိုမိုတိကျသောထုတ်ကုန်ကိုသင်လိုချင်လျှင် oscillation tool ကိုရွေးချယ်သင့်သည်။ ကြီးမားသောပစ္စည်းများသိုလှောင်သည့်အခါ oscillation tool နှင့် saving အချိန်၏အရွယ်အစားကြောင့် Oscillation Tool သည်အစပြုသူများအတွက်အလွန်အကျိုးရှိသည်။ သတိရပါ, လှိုဆက်မှုကိရိယာသည်အစပြုသူများအတွက်အလွန်သင့်တော်သည်’အကြီးစားစီမံကိန်းများအတွက်ကိရိယာတစ်ခုအတွက်ကိရိယာတစ်ခု။
ရရန်အဆင်သင့်oscillatingtoolသို့မဟုတ်muiltiptlest tool နှင့်အတူ Rotary tool ကို? ကျွန်ုပ်တို့၏ထိပ်တန်းထောက်ခံချက်မှာဖြစ်သည်မစ်ကြီး။ ကျနော်တို့အရေအတွက်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါတယ်oscillatingtool နှင့်Rotary Tools.သူတို့ကအလွန်အမင်းပြန်လည်သုံးသပ်ကိရိယာsသင်နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအားလုံးနှင့်အတူသင်စီမံကိန်းအများစုအတွက်လိုအပ်ပြီးကိရိယာများအတွက်အစိုင်အခဲအမှတ်တံဆိပ်များကကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသည်။
အကောင်းဆုံးပါဝါကိရိယာများ Rotary Multi tool ကို rotary diy tools တွေကို အိတ်ဆောင် Power Hobby Rotary Tools Kit သေးငယ်တဲ့ rocary tool ကို ပါဝါ Tool ပစ္စည်းများ စံပြပါဝါ tools များ Power Tool ကိုနှမြော Rotary Numbering Tools များ muiltiptlest tool နှင့်အတူ Rotary tool ကို